Depiote Randrianarisoa Guy Rivo : “Mila governemanta hiasa izahay” | NewsMada
Depiote Randrianarisoa Guy Rivo : “Mila governemanta hiasa izahay”
“Mangataka ny governemanta hanome rano madio ny mponina aho, solombavambahoaka Tim, hanala ny fako, hanome fahasalamana maimaimpoana ho an’ny vahoaka. Mangataka ny governemanta ho demokraty koa aho, hanokatra ny MBS, hanokatra ny Tiko, hanokatra ny orinasa tsirairay avy eto Madagasikara izay sahirana.”
Io no navalin’ny solombavambahoaka avy amin’ny Tim, Randrianarisoa Guy Rivo, teny Tanjombato, afakomaly, manoloana ny resaka etsy sy eroa ny amin’ny tokony hanovana na hanamboarana ny governemanta tato ho ato. “Izay no andrasanay solombavambahoaka. Izay no nifidianana anay. Raha tsy tanteraka izay, mila ovaina ny governemanta. Mila ny governemanta hiasa izahay”, hoy izy. An’ny filoham-pirenena izay fanovana izay.
Filohan’ny Repoblika izy, mpanatanteraka. Mahafantatra ny soa sy ny tsara izy, ahafahany manatanteraka ny asa. Nomen’ireo solombavambahoaka azy ny lalàna mifehy ny tetibola, taona 2016, hahafahany manao izany ary ahafahan’ireo solombavambahoaka mitsikera raha tsy mety… “Anjarany ny mahita: hiaraka amin’io governemanta io ihany ve izy sa hanova governemanta?” hoy ihany izy.